एमसीसी : भ्रम र यथार्थ–३
नवराज कुँवर काठमाडौं, १४ माघ
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अहिले चर्चामा छ । अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलर सहायता रकम नेपालले लिँदाका बखत एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई लिएर बहस छेडिएको छ । सम्झौताका बुँदामा नेपाल तल परेको भन्दै कतिपयले संशोधनको माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भने एमसीसी परियोजनाबारे थरीथरीका हल्ला फैलिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता : हल्ला र वास्तविकता
एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपालमा सिरिया र इराकमा जस्तो क्याम्प खडा गरेर बस्ने, चीनसँग नेपालको दूरी बढ्ने, जे गर्दा पनि नेपालले अब भारतलाई सोध्नुपर्नेजस्तो थुप्रै विषय सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका छन् । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने कतिपय व्यक्ति नै यस्तो बोल्दै हिँडेका छन् ।
देशकै बजेटलाई ओझेल पार्ने एमसीसीको शक्ति
वास्तवमा एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने हो त ? यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो त ? सम्झौता गर्दा नेपाल तल परेकै हो ? यस्तै प्रश्न, एमसीसीसँग जोडिएका भ्रम र सत्य उजागर गर्ने प्रयासमा शिलापत्रडटकमले मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६, ०७:००:००
१८ घण्टासम्म अस्पतालमा भोकै रुँदै बस्यौँ
निको भए कोरोनाका १ लाख ३३ हजार बिरामी
कोरोनाभन्दा भयङ्कर महामारीकी साक्षी
घरमै बसेर देश जोगाउने समय